HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 6-JULY-2020
Monday July 06, 2020 - 11:43:27 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXTOOYADA oo ka hadashay baaqas ada Shirkii Madaxda Dowladda & D/Goboleedyada Shalay ayaay ku aadaneyn maalintii uu Ma daxweyne farmaajo kulanka ku casuumay Ma daxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Ban aadir,hayeeshee shirkaasi uu baaqd
MADAXTOOYADA oo ka hadashay baaqas ada Shirkii Madaxda Dowladda & D/Goboleedyada Shalay ayaay ku aadaneyn maalintii uu Ma daxweyne farmaajo kulanka ku casuumay Ma daxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Ban aadir,hayeeshee shirkaasi uu baaqday, waxa ana ka hadashay Mad axtooya da Soomaa liya. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soo maaliya Cabdi Nuur Maxamed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dib ka soo sheegi doonto waqtiga Cusub ee uu qabsoomayo kulan ka la wada sugayo ee Golaha Amniga Qaranka. Sidoo kale waxaa uu sheegay in u jeeada shirkaasi loo qabanayo ay ka go'an tahay in la ga dhabeeyo ayna kasoo baxaan qodobo dan u ah ajendeyaasha qaran ee laga wada had layo. "Waqtiga cusub ee uu qabsoomayo kulan ka la wada sugayo ee Golaha Amniga Qaran ka waxa la iclaamin doonaa xilliga ku habboon. Ujeeddada shirka loo madlanyahay waa in la ga dhabeeyo rabitaanka xooggan ee ay shaca bku ku doonayaan inuu kulanku dhaco, ayna ka soo baxaan qodobo dan u ah ajendeyaasha qaran. Sababaha uu shirka uu iclaamiyay Mada xweyne Farmaajo u baaqday ayaa waxaa ka mid ah inay diideen ka qeyb-galka Shirka Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbala nd,kuwaas oo tabasho ka qaba Dowladda Mad axweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si heer sare ah loogu soo dhow eeyay M/Muqdisho,ka dib safar 10 Maalmood qaatay oo uu ku tegey dalka Qadar.
R/Wasaare Kheyre waxaa garoonka diyaa radaha Aadan Cadde ku soo dhoweeyay Wasi iro katirsan Xukuumada Soomaaliya, Xildhiba ano katirsan 2da aqal iyo masuuliyiin kale.
Soo dhaweynta ra’iisul Wasaaraha ayaa Shalay ka duwaneyd kuwii hore, iyadoo inta badan Ra’isul wasaaraha marka uu dalka ku soo laabanayo soo dhaweyn jireen xubno yar oo wasiiro iyo shaqaalo katirsan xafiiskiisa.
Md.Xasan Cali Kheyre R/Wasaaraha Sooma aliya ayaan waxa ay wararku sheegayeen in arrimo u gaar ah uu la xiriiray safarka uu ku te gey Qatar. Wararka qaar ayaa waxa ay shee gayeen in booqashadiisa ay la xiriirtay arrimo la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed.
Soomaaliya oo shixnad kaalmo agab ca afi maad ah ka heshay Midowga Yurub
Wasiiradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bu lshada ee JF/Soomaaliya, Dr. Fawsiya Abiikar Nuur, ayaa Shalay oo Axad aheyd guddoon tay kaalmo caafimaad oo 14.5 tan oo ah agab lagu xakamaynayo faafidda cudurka safmarka ah ee Koroona feyrus iyo kahortagga daadad ka oo ay ku deeqday Midowga Yurub, lana soo mariyay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda a anu saaxiibada nahay ee Talyaaniga oo lagu soo gaarsiiyay Gegidda Diyaaradaha Caalami ga ee Aadan Cabdulle ee Caasimadda Muqd isho diyaarad xamuul ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Md.Danjire Axmed Ciise Cawad, oo ka hadlay munaasabadda guddoomidda, oo ay goobjoog ka ahaayeen Safiirka Midowga Yurub, Mudane Nicolas Berlanga iyo Safiirka Jamhuuriyadda Talyaaniga, Mr. Alberto Vec chi,ayaa uga mahadceliyay Midowga Yurub iyo Dowladda Talyaaniga kaalmadooda caafimaad oo sare u qaadaysa awoodda xirfadlayaasha caafimaadka ay kaga hortagayaan COVID19.
Waxa uu caddeeyay in duulimaadkani oo ah kii 1aad ee bani’aadannimo oo Midowga Yu rub agab caafimaad ku soo gaarsiiyo Muqd isho ka koobnaa af-saabka (maaskaro), darer aha gacmaha lagu dhaqo, gacmo gashiga (ga loofyo), dharka ilaalinta leh iyo qalabka baarit aanka, waxaa intaa sii dheer agabka lagu mooso daadadka.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa diiwaangelisay tan iyo 16 Maar so 2,961 bukaan oo uu soo ritay xanuunka Kor oona feyrus, oo ay ka mid yihiin 973 ruux oo bogsatay iyo 92 ruux oo u geeriyootay.
Dowladda Qatar oo cambaaraysay qaraxii Dorraad ka dhacay Muqdisho.
War-murtiyeed kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda ee Dalka Qadar ayaa lagu cambaareeyay qaraxii waxash nimada ahaa ee ay kooxda Al-Shabaab Dorraad ka geysteen M/ Muqdisho.
Dowladda Qadar ayaa tacsi u dirtay Dowl adda Soomaaliya iyo Ehelada Dadkii ku waxy eelloobay qaraxa, iyadoo Dadkii ku dhaawacm ayna Alle ugu rajeysay inuu bogsiiyo.
Xukuumadda Doxa ayaa sheegtay inay Dow ladda Federaalka Soomaaliya la garab taagan tahay taageera kasta oo lagaga hor-tagayo ficil lada gurracan ee Kooxda Al-Sha baab.
Faahfaahin ka soo baxaysa diyaarad shil ku gashay magaalada Baardheere
Diyaarad laga leeyahay dalka Kenya ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha M/Baardh eere ee gobolka Gedo.
Lama oga sababta ras miga ah ee diyaarad an ay shilka u gashay hase yeeshee waxaa wararka ay sheegaya an in diyaaradan ay mid ka mid ah lugaheeda ay qaraxday. Diyaaradan oo ah nooca rakaab ka iyo xamuulkaba qaada Fokker 50 kana diiwaangashan 5Y-WFC ayaanay jirin cid wax yeelo ka soo gaartay.
Diyaaradan ayaa ah tii 2aad oo laga leeyah ay dalka Kenya oo shil ku gasha dalka Soom aaliya waxaana diyaarad ay lahayd African Express ay ku burburtay meel ku dhow M/Bard aale bishii May afarteedii ee sanadkan.
Diyaaradan ayaa waxaa soo ridey sida la ru meysan yahay ciidamada Ethiopia waxaana ku dhintey lix ruux oo saarnaa diyaarada.
Shilka diyaaradani ayaa ku soo beegmaya xilli Shalay ay dib u bilowdeen duulimaadyada gudaha ee dalka Soomaaliya.
Dagaalkan oo u dhexeeya laba beelood oo xinif colaadeed beryihii la soo dhaafay u dhax eysay ayaa waxa wararka hordhaca ahi sheeg ayaan in hal qof ku dhintay afar kalena ku dhaawacmeen.
Dagaalkan oo Shalay gelinkii dan be ka bilaabmay dul eedka Horufadhi oo waqooyi bari kaga quman Buuhoodle ayaa la sheegayaa in sababtiisa ay lahayd nin habeen imadii Habeen hore lagu diley magaalada Buuhoodle.
Sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah ayaan weli si buuxda loo ogayn khasaaraha dhabta ah waxase ay noo xaqiijiyeen in rasa astii ay joogsatey, iya doo ciidamadii ay beel uhuna ay dib u kala fa dhiisteen aadse looga cabsi qabo in dib uu u bilaabmo.
Dagaalkan ayaa dhabarjab ku ah gogol nab adeed oo 2da beelood haatan lagu dhexdhexa adinayey, iyadoo ay halkaas ku sugan yihiin madax-dhaqameed, cuqaal, culimo iyo waxgar ad si ay xal uga gaadhaan xiisadan oo mudo dheer soo noqnoqtay.
Wasaaradda Waxbarashada oo shaaci say Jadwalka Imtixaanka dugsiyadda Sare
Xafiiska Imtixaanaadka iyo Shahaadooyin ka ee Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ay aa shaaciyay Jadwal ka Imtixaanka dugsiy ada Sare ee dalka oo dhaw aan bilaaban do onna.
Imtixaanka wuxuu dhici doonaa Sabti 18 Luuliyo 2020 Waxaa sidoo kale lagu sheeg ay Warbixinta Wasaradda waxbarashada sidii in Imtixaanka Ammaankiisa la adkeyn doono.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa Shalay bilowday dhageysiga dacwad loo haysto askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soo maaliya oo Isgoyska Ceel-gaabta ee Muqdisho si bareer ugu dilay nin odey halkaas ku lahaa goob yar oo Ganacsi.
Nuur Daahir Geedi ayaa qirtay inuu dilay marxuumka lagu magacaabi jiray Cumar Xa san Macalin. Askarigan ay aa u dilay muran ka dhash ay laba kun oo shilin Soma ali ah oo Odeyga kaga iibs an lahaa Sigaar.
Xeer Ilaaliyada guud ee Maxkamadda Cii damada Qalabka Sida Gen, Cabdullaahi Buule Kameyn ayaa Maxkamadda ka dalbaday in xu kun dil toogasho ah lagu fuliyo eedeysane Nu ur Daahir, taasi oo noqoneysa qisaasta Marx uum Cumar Xasan Macalin.
Askarigan loo haysto dilka qof rayid ah ayaa noqonaya kii 2aad oo muddo toddobaad ah aymaxkamada ciidamada qalabka sida dhagay sato dacwadiisa,waxaana dhowr maalmood ka hor maxkamadu ay dhagaysatay askari labo ruux ku diley magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowlada oo isugu jira Boolis iyo Milatari ayaa ku kaca falal dil ah gudaha M/ Muqdisho iyo agagaaaheda iyadoo xabsiga dhexe ay ku xiran yihiin askar xukun sugayaal ah iyo qaar kale oo dil lagu xukumay.
Xildhibaan Xuurshe oo la sheegay in si kedis uu ku safray, intii aan la qur-goyn
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, Sheekh Cismaan Bar re ayaa ka had lay dil kii argaga xa lahaa, ee ay Shalay Shaba abka u gaysteen Xild hibaan Maxamed Ma xam uud Siyaad (Xuurshe).
Xildhibaan Xuurshe oo ka tirsanaa Baarla maanka Hirshabelle ayaa waxaa waddada u galay mintidiinta Ururka Al Shabaab, xilli uu ku safraayay wadada xiriiriso Magaalooyin ka Muqdisho iyo Jo whar, iyagoona ku qabtay meel u dhow deegaanka Gololey, oo hoos-tagta Degm adaBalcad. Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirsh abelle oo wareysi siiyay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa marka hore umadda Soomaaliye ed, reer Hirshabelle iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxayba uga tacsiyadeeyay geerida ku timid Xildhibaan.
Gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in Xildhibaan ka uu ka amba-baxay Magaalada Jowhar, ku na sii jeeday Magaalada Muqdisho, isla-mar kaana ay dhexda u galeen kooxaha nabadiid ka ee Al Shabaab. Waxa uu intaa ku daray in Shabaabka ay ula dhaqaaqeen meel ka fog deegaanka Gololey oo lagu magacaabo Yaaqle.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay ina anu xaqiijin karin inay nool yihiin iyo in kale rag gii kale ee la socday Xildhibaanka, balse uu bartilmaameedka uun ahaa Xildhibaanka.
Su’aal muhiim ahayd oo la weydiiyay ayaa ahayd sida uu Xildhibaanku ugu bareeray wad ada Muqdisho iyo Jowhar, oo la fahamsan ya hay inay weeraro ka gaystaan mintidiinta Al Shabaab, waxaana uu sheegay in Xildhibaa nku uu si deg deg ahi ku soo baxay, isagoo aan soo ogeysiin Guddoonka Baarlamaanka. Marka Xildhibaanada safarka geliyaan ayuu sheegay inay la soo socodsiiyaan Guddoonka Baarlamaanka, si xaaladooda amni looga warqabo.
"Runtii Xildhibaanka si kedis ah ayuu ku soo baxay. Xildhibaanada markii ay safar aada yaan Guddoonka ayay soo ogeysiiyaan, si am maankooda loo suggo, si looga war haayo xa aladooda, laakiin Xildhibaankan runtii si kedis ah ayuu ku soo baxay. Gaari qaas ah ayuu soo qaatay, waxaana ka war helnay geeridiisa, wadadaasina waala isticmaalaa oo waala ma raa, laakiin waxaad ogtahay kooxaha nabadiid ka dalkan iyo caalamkaba khataraha ay ku hay aan, meel kasta ayay wax ka dhacaan, marka waxaan leeyahay waqtigiisa ayaa dhamma aday. Qofka haddii waqtigiisu dhammaadayna meeshii ay naftiisa ku baxeyso inuu taggo waa lagama maarmaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Waxa kaloo uu yiri "Xildhibaankan anaga no oma soo sheegin safarkiisa. Xildhibaanada marka ay wadada soo marayaan ilaalo way soo raacdaa, oo ammaankooda waala suggaa, laakiin qofka asagaa masuul ka ah am maankiisa, haddii uusan soo sheegin, oo uu san dhihin waan baxayaa ilaalo ayaan u baah anahay, haddee cid ma ogaan karto. Qof kale inta teleefan loo diro ammaankaaga ka waran qofka lama yiraahdo, asaa xogtiisa inuu soo gudbiyo laga rabaa.”
Xildhibaan Xuurshe ayaa noqonaya Xildh ibaankii 3aad oo Baarlamaanka Hirshabelle ka tirsan, laguna dilo wadada dheer ee isu xirto Magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. Sanadkii 2018-kii ayay ahayd markii Laba Mudane oo Baarlamaanka Hirshabelle ka tirsanaa ay wad adaasi ku dileen dagaal-yahanada mayalka adag ee Al Shaaab.
Somaliland oo ka falcelisay kulan ay yee sheen Farmaajo iyo danjiraha Shiin aha
Xukuumada Somaliland ayaa ka hadashay kulankii Dorraad M/Muqdisho ku dhex-maray ma daxweyne Farmaajo iyo Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Qin Jian.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Yaasiin Faratoon ayaa she egay inaysan marnaba So maliland saameyn ku yee lan doonin kulamada ka dhanka ah ee ay ku howlan tahay dowladda federal ku.
Wasiir Faratoon ayaa carrabka ku adkee yay in xiriirka cusub ee So maliland la yeelatay Taiwan uusan waxba ka badaleyn kulankaasi ka dhacay Muqdisho, oo si gaara diirada loogu saarayey xiriirka iyo he shiiskaasi cusub.
"Waa wax aan fili karno, labadooda taas ayey ka wada duulayaan, laakiin annaga ma ahan wax na khuseeyo, waxey iyagu ku he shiiyeen iyo waxey ka wada hadleenba lama socono mana ahan wax aan ku raacsanahay oo iyaga ayey danahooda tahay, anaga iyo Ta iwan waxaa naga dhaxeeya dano kale,” ayuu yiri Wasiir Yaasiin Maxamed Faratoon oo la ha dlayay idaacadda VOA. Faratoon ayaa sheeg ay in Taiwan iyo Somaliland ay dano isku mid ah kala dhaxeeyan, isla markaana ay khuseyn oo waxba yeelayn kulamada dowladda feder aalka iyo Shiinaha ee la xiriira heshiiiska cusub ee dhawaan ay kala saxiixdeen.
Heshiiska cusub ee ay dhawaan kala saxi ixdeen Taiwan iyo Somaliland ayaa abuuray xii sad cusub, maadama ay labada dhinac kala sheeganayaan inay qeyb ka yihiin Soomaaliya iyo Shiinaha.
Waxaa la fahamsan yahay in danjiraha Shii naha u fadhiya Soomaaliya (Qin Jian) iyo mad axweyne Farmaajo ay labaduba ka mideysan iney xad gudub tahay xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmara labada maamul.
Rag looga shakisan yahay Al-Shabaab iyo Daacish oo la qabtay.
Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Puntland ayaa hawlgal amniga lagu sugayay oo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan mag aalada Boosaaso kusoo qa-qabtay rag ay uga shakisan yahiin iney ka tirsan yahiin kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
Warbaahinta gudaha ayey saraakiisha ha wlgalkaan hogaaminayay u sheegeen iney sameynayeen hawl gal lagu xaqiijinayay amaanka isla mar kaana guri guri loo baarayay xaafado ka tirsan Boosaaso.
Toban ruux oo looga shakisan yahay Al-Shaba abnimo iyo iney ka tirsan yahiin Daacish ayaa lagu qabtay hawlgalka sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha hogaamineysay hawlgalka.
Wararka waxey intaas ku darayaan in qaar ka mid ah guryaha laga helay hub iyo jaakadaha qaraxyada kuwaas oo sida la sheegay la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka gobolka Bari.
Saldhigga dhexe ee Boosaaso ayaa lagu xiray dadkii lagu qabtay hawlgalka, waxaana la gu sameyn doonaa baaritaanno dheer iyadoo lasii deyn doono qofkii dambi lagu waayo.
Boosaaso waxaa horay uga dhacay falal amni xumo oo uu ka mid ahaa weerar is ismii daamin ah oo lagu dilay gudoomiyahii gobolka Bari iyo xubno kale oo ka tirsanaa M/mulkiisa.
Ururka OIC oo cambaareeyay qaraxya dii ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo.
Ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa si kulul u dhaleeceeyay qaraxyadii ay Al-Shaba ab ay Dorraad ka geysteen Magaalooyinka Muq disho iyo Baydhabo, kuwa asoo ay waxyeello kasoo gaartay Dad isugu jir a Ray id iyo Ciidan.
Ururka OIC ayaa dhamb aal tacsi ah u diray Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelada iyo Qoys aska Dadkii ku waxyeelloobay qaraxyada as, wuxuuna u rajeeyay in uu Alle u booga dhayo Dadka dhaawaca ah.
Ururka OIC ayaa ku cel-celiyay cambaarayn ta iyo diidmada adag ee ku aaddan ficillada kooxaha nabad-diidka, wuxu una ku dhowaaq ay inay Dowladda Sooma aliya la garab taa gan yihiin mar walba taage ero kasta oo laga ga hor-tagayo falalka gurracan ee Argagixisa da. ah
Guddoomiyaha G/Shacabka Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/rax maan iyo Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee G/Shacabka C/wali Sheekh Ibraahim Muu dey ayaa kulan gaar ah la yee shay Hoggaan ka Madasha Xi sbiyada Qaran oo ay ma talayeen Guddoomiy aha Madasha Xisbiyada Qaran Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sh. Axmed iyo Madaxwey nihi hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa bilowday Shalay, waxaana uu soo gaaray illaa Xalay fiidkii, iyadoo laga wada lana iska xog wareystay xaalada siyaasadeed iyo marxalad aha uu dalku galayo.
War ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qar an ayaa lagu faah faahiyay kulanka Hogga anka Madasha iyo Guddoonka Golaha Shacab ka oo ahaa kulan markii hore ay soo dalbad een.
Guddoomiye Mursal iyo Muudey ayaa war bixin kala duwan oo xaalada dalka la wadaag ay madaxda Madasha, gaar ahaan arrinta doo rashada, waxaana la sheegay inay u sheege en in la hakiyay hababkii doorashada ee Gud doomiyaha Guddiga doorashada Xaliima Ya rey u soo bandhigtay Baarlamaanka dhamaad kii bishii hore.
Waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa kamid ahaa baahida loo qabo inay waq tigooda ku dhacaan doorashooyinka, ayna noq daan doorashooyin laga wada tashaday loo dhan yahay, keeni kara nabad iyo horumar loo gana gudbi karo xaaladda adag ee dalku uu ku jiro, isla markaana ay jirto mabaadii guud iyo dammaanad lagu xaqiijinayo arrintaas, in wada hadallada la sii wado si’ is faham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka, sidaas oo ka le waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka u ah doorashooyinka in dadaal xooggan la geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu waajihi lahaa doorashooyinka aragti mideysan oo dhalin kar ta kalsoni, sharciyad iyo taagerada shacabka.
Waxaan kaloo la isla gartay in wada hadal lada la sii wado si ay u sahlanaato in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha xasaasiga ah ee ku gadaaman doorashada Qaranka, ayna tahay in maanka lagu hayo dhinacyada muhiimka u ah hanaankaas oo ay tahay in dadaal xooggan lageliyo sidii loogu qancin lahaa, si loo helo ar agti mideysan oo ay kadhalan karto kalsooni iyo in lagu wada qanco habka doorashooyinka oo loo marayo dariiqa saxda ah ee uu qabo dastuurka KMG ee Soomaaliya.
Al-Qudus al-Carabiya oo shaaciyey arrin ay qarinayeen Imaaraadka Carabta iyo Israel
Imaaraadka Carabta ayaa waxaa soo if-bax aya in xiriirka uu la leeyahay Israel uu ka ball aaran yahay sidii markii hore loo maleeyey, si da ay sheegeen warbixino cusub.Imaaraadka ayaa cor onavirus-ka cusub u is ticmaalaya in uu heshi is kula galo Israa’iil taa si oo ah tii ugu dambe ysay ee madax carbe ed ay xiriir kula yeel an ayaan Israa’iil, sida baahiyay wargeyska Al-Qudus al-Carabiya oo fadhigiisu yahay Lon don.
Wargeyska ayaa Jimcihii waxaa uu daabac ay in 42 shirkadood oo laga leeyahay Imaara adka ay heshiis la galeen laba shirkadood oo laga leeyahay Israa’iil, si loo horumariyo xalka farsamo loona xakameyo safmareenka. Imaa raadka ayaa markii hore shaaciyey kaliya in he shiiska ay ku jireen laba shirkad, waxaase ha da soo baxday.
2da shirkadood ee Israa’iil laga leyahay wa xay la shaqeeyaan wasaaradda dagaalka ee Dowladda si ay militaria u siiso qalab iyo gant aalo. Bishii June 26-keedii, Imaaraadka Carab ta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ma shaariic dhanka dawada ah ka fulinayo Israa’iil si loola dagaalamo coronavirus, waana isla ma alintii ay warbaahinta Israa’iil wariyeen in xuku umadda Abu Dhabi ay siisay Tel Aviv 100,000 oo ah qalabka lagu tijaabiyo coronavirus.
R/wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay Dowladiisu la kashan doonto Imaaraadka la dagaalanka coronavirus kasokoow in uu maq anyahay xiriir kii diblomaasiyadeed.
Imaaraadka Carabta xiriir diblomaasiyade ed lama lahan Israa’iil, laakiin sanadihii u dam beeyay waa ay isu soo dhowaanayeen labada Dowladood.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa’iil Israel Katz ayaa shir golaha wasiiradu ay ku yeeshe en Qudus bishii August ee sanadkii hore in uu ka shaqaynayo in uu heshiis la gaaro isla markana uu xiriir wanaagsan la sameysto dalalka gacanka carbeed ku yaalla.
Bishii December, wasiirka arrimaha Dibad da Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray maqaal ay daabacday majaladda The Spectator oo sheegaya xulifadda Carab iyo israa’iil ay qaabeynayaan Bariga Dhexe.
Durbadiiba waxaa maqaalka soo dhoweey ay Netanyahu oo yiri "waan soo dhoweynayaa xiriir isu soo dhawaanshaha Israa’iil iyo dalal badan oo carbeed. Waxaa la joogaa waqtigii hagaajinta xiriirka iyo nabadda.”
Dadaaladda xiriir hagaajinta ayaa waxaa ay im aanayaan iyadoo Israa’iil ay qorsheyneyso in ay goosato qaybo badan oo ka mid ah Daanta Galbeed, oo ay ka mid tahay dooxada Jordan talaabadaas oo ah mid aad loogu muransan ya hay islamarkaana ay diideen madaxda iyo dad ka Falastiin. XIGASHO:CAASIMADDA.NET
Dhismaha Waddada isku xirto M/Balad w eyne iyo Jento Kundisho oo si rasmi ah u bilaawday.
Waxaa Shalay si habsami leh u bilowday dhi smaha waddada isku xirta Beledwey ne ilaa jen to kundisho taasi oo bur bur xoogan u geyst een fatahaadihii kusoo laalabtay sanadihii da mbe magalada.
Mashruuca dhis maha Wadad aan ayaa waxaa horaan tii sanadkan waxaa Dhagax dhigay Ma daxweynaha Maa mulka Hirshabe elle Md.Ma xamed Ca bdi Waa re.
Dhinaca kale Qa ar kamid ah bulsha da gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweynaayo dhismaha ka bil awday wad adan isku xirto M/Baladweyne ilaa Jento Kudi sho madama bur bur xoogleh ka jiray isla mar kaan dhibaato xoogan lagu qabay isticmaalka wadadaas.
Erdogan oo lagu haysto qorshe uu madxaf caan ah ugu bedelayo masjid
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdo gan, ayaa ku gacan sayray dhaliil ugu timid gu daha dalkiisa iyo dibeddaba kadib markii uu sh eegay inuu doonayo in madxafka caanka ah ee Hagia Sophia uu ka dhigo masjid.
Maxkamadda Turkiga ugu sareysa ee dha nka maamulka ayaa ka baaraandegaysa in ma dxafkaasi ku yaalla Istanbul, horayna u ahaa kaniisadda loo bedalo masjid.
Xoghayaha arimaha dibedda ee Marayka nka,Mike Pompeo, ayaa Arbacadii ugu baaqay Turkiga in madxafka sidiisa loo daayo oo aan wax isbedal lagu sameyn.
"Dhaleeceynta dalkeena loo jeedinayo ee ku aaddan Hagia Sophia ayaa ah weerar ka dhan ah madaxbannaanideena," ayuu yiri mad axweyne Erdogan.
Maxkamadda ayaa la filayaa in go'aankee da ay shaaciso laba todobaad gudahood.
Hagia Sophia ayaa waxaa markii ugu horrey say dhisay Boqortooyadii Byzantine qarnigii 6-aad ee milaadiga, balse waxaa markii dambe masjid ka dhigay Cusmaaniyiinta oo sanadkii 1453 qabsaday Qisdhandhiiniyah (Constanti nople) Shalayna ah Istanbul.
Waxaa markii dambe madxaf ka dhigay hog aamiyihii asaasay Turkiga casriga ah, Mustafa Kemal Ataturk.
Qorshaha cusub ee masjidka looga dhigayo ayaa khilaaf horleh dhex dhigay Turkiga iyo Gir iigga oo si dhaw ula socda taariikhda Boqorto oyaddii Byzantine ay ku reebtay dalkaasi Muslimka ah.Madaxweyne Erdogan ayaa san adkii hore sheegay inay khalad weyn ahayd in Hagia So phia loo bedalo madxafka.
Dagaalka ayaa yimid,kadib markii xalay ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen Sald-higa Ciidamada Dowladda & kuwa Koo-nfur Galbeed ee degaanka Awdiinle,wa-xaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Mid kamid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Baay ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab ayna fashiliyen sidoo kale ay ka dileen 5 Xubnood oo ka tirsanaa waa sida uu had-alka u dhigay.
Maamulka degaanka Awdiinle ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay hay-een xogta ku saabsan weerarkaas,isla markaana Ciidamada Dowladda & kuwa Koonfur Galbeed ay u diyaar sanaayeen iskana difaaceen.
Wararkii ugu dambeeyay ee saaka aan ka heleyno degaanka Awdiinle ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheeg-ayaan in xaaladu ay tahay mid degan,hay-eeshee Ciidamada Dowladda & kuwa Ko-onfur Galbeed ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ka sameeynayaan duleedka degaankaas.
Israel oo weerar waxyeello gaystay ku qaad ay warshad Nukliyeer oo ku taalla Iran
Wargeys kasoo baxa dalka Kuwait oo lagu magacaabo Al-Jarida ayaa daabacay in Israa’iil ay weerar Internet-ka ah ku qaday warshad soo saarta Nuclear oo do-wladda Iran ay ku leedahay magaaladda Natanz. Dowladda Iran ayaana dhacda-daas waxaba kasoo qaadin, balse qubar-adu waxay sheegayaan in Bakhaar xasa-asi ah oo qalab badan ku jiro ay waxyeelo soo gaartay.
Ilo-wareed ayaa Wargeyskan aan soo xiganeyno ee Al-Jaridda u sheegay in weerar Internet-ka ah warshaqadda lagu qaaday. Warkaan waxaa uu xiriir la leey- ahay weerar hore oo lagu qaaday kaabeyaasha biyaha Isra’iil, kaasi oo lagu edeeyay in ay fulisay dowladda Iran.
Sida uu wargeysku ku waramay howlgalladaan waa kuwo cuuryaamin ah. Qaraxyo ka dhacay Natanz iyo Parchin waxaa lala begsaday Bakhaaro lagu key-dinayay gaaska UF6 oo lagu bacriminayay Uranium-ka.
Bishii November sanadkii 2019-kii Iran ayaa shaaca ka qaaday soo saa-rista gaaska IR-6. Waxayna dowladda Iran soo saaristaas ku horumarisaa magaalada Natanz.
Cali Akbar Salixi oo ah afha-yeenka ururka Quwadda Atomic-ga ee Iran ayaa ka hadlay gaaska iyo soo saa-ristiisa cusub. Wuxuuna sheegay in maga-alada Nantz sanadkii 2019-kii ay aheyd meel ay ku yaalaan ku dhawaad 30 Bak-haar oo uu ku keydsanyahay gaaska loo yaqaano IR-6.
Wargeyska Iran ayaa ku dooday in dowladda Iran ay hadda weysay 80% gaaskeeda. "Kani waxaa uu u egyahay weerar Electronic ah oo lagu qaaday isku xirka Internet-ka, kaasi oo ilaaliya ham-aha Keydka. Iran waxay u baahantahay laba bilood si ay khasaarahaas uga soo kabsato” ayuu wargeysku qoray.
Booliska dalka Itoobiya ayaa sheegay dadka ku dhintay mudaharaadyada rabsh-adaha watay ee dalk